1. यो विश्वास गरिन्छ कि धेरै व्यक्तिको पुरानो इन्स्टाग्राम खाताहरू हुन सक्छन् जुन उनीहरूले लामो समय सम्म प्रयोग गर्दैनन्। तर यो बन्द हुँदैन र तपाईंको खाता एक्लै छोड्छ, त्यसैले तपाईंको जानकारी र फोटोहरू अझै अनलाइन हुनेछन्। तसर्थ, जानकारी र तस्वीरहरूमा पहुँच गर्नबाट अरूलाई रोक्नको लागि। आज हामी कसरी इन्स्टाग्राम खाता मेटाउने बारे चरणहरूको परिचय दिन जाँदैछौं। इन्स्टाग्राम खाता मेटाएर, यो २ तरिकामा गर्न सकिन्छ: इन्स्टाग्राम खातालाई अस्थायी रूपमा निष्क्रिय गर्नुहोस् र स्थायी रूपमा मेटाउनुहोस्। यदि तपाइँ यो कसरी गर्ने जान्न चाहानुहुन्छ भने, जाऔं र हेरौं।
2. कसरी अस्थायी रूपमा एक इंस्टाग्राम खाता निष्क्रिय गर्न
3. इंस्टाग्राम खाताको अस्थायी निष्क्रियताको लागि, यसले खाता मालिक, अनुयायीहरू र आम जनता बनाउँदछ। खाताहरू हेर्न वा बन्द खातामा गतिविधिहरू प्रदर्शन गर्न असमर्थ। जे होस्, यस प्रकारको खाता बन्दको फाइदा भनेको तपाई पछि सक्रियता पुनःसुरु गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको इन्स्टाग्राम खातालाई अस्थायी रूपमा निष्क्रिय गर्नका लागि चरणहरू निम्नानुसार छन्: पहिले, तपाई जानुहोस् https://www.instagram.com/ तपाइँको इन्स्टाग्राम खाता निष्क्रिय गरेर, तपाइँले वेबसाइट ब्राउजर मार्फत मात्र लगइन गर्नुपर्नेछ। इंस्टाग्राम अनुप्रयोगको माध्यमबाट बन्द गर्न सक्दैन
4. जब प्रणालीमा लग इन गरियो तपाईंको प्रोफाइल पृष्ठ प्रविष्ट गर्न थिच्नुहोस्।
5. त्यसोभए सम्पादन प्रोफाइल बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
6. पछि प्रोफाइल सम्पादन पृष्ठ प्रविष्ट गर्दा तपाई बटन थिच्न सक्नुहुन्छ। "मेरो खाता अस्थायी रूपमा निष्क्रिय गर्नुहोस्"
7. त्यस पछि तपाईलाई अस्थायी रूपमा तपाईको खाता निस्क्रिय पार्ने र तपाईको इन्स्टाग्राम खाता पासवर्ड प्रविष्ट गर्न को लागी एक कारण छनौट गरिने छ। तपाईले सबै सक्नु भएपछि बटन थिच्नुहोस्। "अस्थायी रूपमा प्रयोगकर्ता खाता निष्क्रिय गरीएको छ"।
8. स्थायी रूपमा कसरी इन्स्टाग्राम खाता मेटाउने
9. तपाईको इन्स्टाग्राम खाताको स्थायी हटाई तपाईको खाता र तपाईको सबै डेटा स्थायी रूपमा मेटाउनु हो। र फेरि प्राप्त गर्न सकिदैन स्थायी रूपमा इन्स्टाग्राम खाता मेटाउने चरणहरू निम्नानुसार छन् - पहिलो चरण तपाई जानुहुन्छ >> https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/ वेबसाइट ब्राउजर मार्फत मात्र इन्स्टाग्राम खातामा लग इन गरेर - त्यसो भए तपाई बटन थिच्नुहोस्। "मेट्नुहोस् .. (तपाईंको खाता नाम) .." सकियो। जे होस्, एकचोटि तपाईंले मेट्नुहोस् खाता बटन थिच्नुभयो भने, तपाईंको खाता तुरून्त मेटिने छैन। तर लुकाइनेछ र निर्दिष्ट मिति र समयमा हटाइनेछ यदि यो अप टु डेट छैन भने, तपाईंको खाता मेटिनेछ। तपाईं फिर्ता र खाता हटाउन सक्नुहुन्छ। तर यदि निर्दिष्ट मिति र समय बितिसकेको छ भने, तपाईंको खाता स्थायी रूपमा मेटिने छ र पुनः प्राप्त गर्न सकिदैन।